RASMI: Jose Mourinho oo xaqiijiyey in kaliya hal ciyaaryahan oo ka tirsan Man United uu amaah ku baxayo bisha Janaayo – Gool FM
(Manchester) 30 Dis 2016 – Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ee Jose Mourinho ayaa shaaca ka qaaday in goolhayaha da’da yar ee Sam Johnstone uu yahay ciyaaryahanka kaliya ee ka bixi doona garoonka Old Trafford, kaasoo amaah ku tagi doona bisha soo socota.
Morgan Schneiderlin, Memphis Depay iyo Anthony Martial ayay fartu ku godnayd, waxaana la la xiriirinayey inay amaah ku bixi doonaan bisha soo aaddan ee Janaayo, laakiin tababaraha reer Portugal ayaa kaliya isku diyaarinaya inuu si ku maal gaar ah u diro Janaayo kaliya goolhaye Johnstone.
23-sano jirkaan ayaan wali hal kulan u safan kooxda waa wayn ee Man United, waxaana safka ka horreeya Sergio Romero iyo David de Gea, waxaana uu ku bixi doonaa amaah si uu waayo aragnimo dheeraad ah uga soo qaato meelo kale, kooxaha Stoke, Sunderland iyo Aston Villa ayayna suuro-gal tahay inuu ku biiro.
“Sam Johnstone waa ciyaaryahanka kaliya, kaasoo aan u ogolaan doono inuu amaah ku baxo, maxaa yeelay ma uusan ciyaarin hal daqiiqo, waxa uu u baahan yahay inuu ciyaaro,” ayuu yiri Mourinho.
“Waxaan haysannaa goolhaye da’yar halkan Joel Pereira, waa goolhaye ciyaaray daqiiqado badan lixdii bilood ee la soo dhaafay Horyaalka Bortuqiiska, haatanna waa xilligii Sam uu isna ciyaari lahaa 6 bilood.”
“Taasina waa amaahda keliya ee aan sameyn doonno.”
Zlatan Ibra "Messi waa nuuc gooni ah, umana malaynayo in aan arki doono laacib sidiisa oo kale ah"
CAJIIB: Guulihii uu gaaray N'golo Kante tan iyo 2015 haddii dhibco ahaan loo beddelo waxay ka sarreeyaan dhammaan kooxaha Ingiriiska